Camarilla Forex chakarurama - Forex zviratidzi Download
musha MT4 zviratidzi Camarilla Forex chakarurama
Camarilla Forex chakarurama
The Camarilla Forex chakarurama inobatsira pakuverenga chamazuva pivot pfungwa pamwe rutsigiro uye nemishonga mumatunhu.
Izvi zvaitwa nokushandisa rapfuura zuva Low, High, Open uye Closed uye kushandisa mashoko kuverenga nhanho gumi izvo shanu ndiyo yakaderera Rutsigiro pamwero uye vamwe mashanu ndivo shanu nemishonga mumatunhu.
zvisinei, rinonyatsooneka zvose izvi siyana ndivo L3 uye L4.
The pivot pfungwa dziri vakawana kushandisa Camarilla mukana wokuti vanhu vanga uye nokudaro Camarilla pivot pfungwa. Izvi pivot mitsetse zvinobatsira chokupika intra-zuva wokutengesera. Naizvozvo chakarurama ichi zvakakunakira Forex vatengesi pfupi izwi uye scalpers.
Trading uchishandisa camarilla chinoratidza.
Sezvo muzvinashawo nguva dzose unofanira kutarisa L3 uye L4 mumatunhu kubva ndidzo nzvimbo kupinda orders.so wako kana mumusika zvikanzwika L3 padanho iwe akavhura Utenge hurongwa uye ikatengesa hurongwa kana mumusika mutengo yomuropa yarova H3 danho.
Unofanira kumirira uye kuzosimbisa vasati kuzarura chero nzvimbo. The L3 ari kurwisa pamwero apo H3 ndiye anotsigira pamwero. Panguva kurwisa uye rutsigiro mumatunhu mumusika mutengo kuti achinje kana panguva risi kujaira kana baba namai. Zvisinei dzimwe nguva izvi reversals anogona kupfupika akararama kuti urege kutungamirira chero mari. Saka sezvo muzvinashawo unofanira zano haana kuvhura zvakaenda pakarepo kana mutengo paricharova ichi siyana. Unofanira kunyarara kwenyu kusvikira zvechokwadi ndaona musika akatora pamusoro Kuchinja. Izvi kungaratidzwa paumbwe kuneta kana Pin bhaa makenduru, kuneta Makwanza kana kuvhuna kure Makwanza pa izvi siyana.
Kana vanotengesa munzvimbo pakati L3, H3 uye breakout mumatunhu, kamwe makashamisa basa nzvimbo ipapo nechokwadi kuti imi kuvavarira diki chaizvoizvo purofiti. Izvi zvinogona kuitwa uchingoti kutora mari ari nechokure kuti haasi kure wakavhurika nzvimbo. The camarilla chakarurama haaratidzi kwenguva ternds.it chete zvinoratidza pfupi izwi yokurera. Naizvozvo kuti ubatsirwe izvi unofanira kuva vakagadzirira kutora mari duku uye vabude kumusika nekukurumidza. Kutadza kuita izvi iwe ichaguma kuita akatevedzana nezvinhu.
Zvisinei kana breakout pamwero iri yakarohwa zvino unogona kuva nechokwadi chokuti munhu wechokwadi kuitika mumusika mitengo. The breakout mumatunhu ari L4 uye H4.if ichi siyana vari akurova unogona kutarisira mitengo kuramba nenzira vakasarudza. Ndiko kureva kana L4 inopfuudzwa ipapo munhu pasi muitiro uye uptrend kana H4 raenda apfuura. Izvi zvinoreva kuti unogona kutenga kana mitengo vachimuka pamusoro H4 nokutengesa kana mitengo kuwira pasi L4 chechetere. Zvadaro unogona kunanga mari panguva L5 uye H5 mumatunhu azvaitwa.
Fig.1.using ari camarilla chinoratidza.
Kubva apa mufananidzo hazvibviri kuona L3 uye L4 levels.however kana pachati iri compressed vanogona kuva zvinooneka. Asi kana uchitarisa kurutivi chati rworuboshwe, nzvimbo yose siyana zvinoratidzwa. Open Demo nhoroondo yokuedza chakarurama ichi.
Camarilla Forex chokukomborerwa ari Metatrader 4 (MT4) paakati uye musimboti wacho Forex chinoratidza ndiko zvokuchinja vaunganidza nhoroondo date.
Camarilla Forex chokukomborerwa inopa mukana kuona peculiarities siyana uye mapatani mu mutengo emuchina izvo usingaonekwi chinoabatsira.
How yokugadza Camarilla Forex Indicator.mq4?
Kopa Camarilla Forex Indicator.mq4 yenyu Metatrader Directory / nyanzvi / zviratidzi /
Right watinya musi Camarilla Forex Indicator.mq4
Chakarurama Camarilla Forex Indicator.mq4 rinowanika Chart yako
How kubvisa Camarilla Forex Indicator.mq4 kubva Metatrader yako 4 chati?
Previous nyayaMune dzimwe Forex Pivot Point chakarurama
inoteveraDema Kufambira Average Forex chakarurama